Xasan Sheikh oo ka horyimid Doorashada kana digay in Xaalada Dalku ay ka Faraha ka baxdo ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Xasan Sheikh oo ka horyimid Doorashada kana digay in Xaalada Dalku ay ka Faraha ka baxdo !
Nov 19, 2020 - 30 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aanay marna la aqbali doonin qaabka dowladda wax u wado ee la doonayo in doorasho lagu aado.
SOMALIA/ DOWLAD DIYAARAD SAARAN DADKEEDIINA
DAAFAHA MUQDISHO (DUUMO KU LAYSAY)?..
Waxaa Nasiib Darro La Soo DARISTA UMMADA
1)xasan shiekh- Xil Kasnimo XUME?..
2) Farmaajo/.. Kartinimo XUME?…
View/ Clans and sub-clans cannot be
Offended by a NATION.
Kkkkkkk ileen weli VILLA SOMALIA lagama samrin
war iska suga intay dorashada dhacayso waa intaas
oo aad soo noqon waydaane
Xassanow adigaa noo lahaa iney Xamar nagula dhex murmaan CIYAALKII DHADHAAB IYO kuwo Ethiopia ka soo shaqo tagey.
Xamar waxaa la xumeeyey markey u taliyeen
Cali Samatar iyo Salxaan.
Adigu waxaad tahay laangaab shiiqaal ah! maxaad u qarisaa qabiilkaaga ? nin jirran oo qabyaaladi dilootay! oo caloosha ka jirran!! duf ku bax!
Daanyeer gurguurte hadaad doorasho diido waxaad kabadinwaydo samee
Hadal badan looma baahno.
1 waa lays gacan saarayaa ee isku tashtaa. Waxaad caruurtii dhadhaab ee xanaaqsan ku gacan saari lahaydeen soo diyaarsada.
2 muranka daaya iska tanasula oo isdhiiba.
Wixii intaas wixii kasoo haro waa iska hadal jeceel.
Ma dhici doonto doorasho macquul ah.
Caqliga caruurta dhadhaab waxa weeye.
Wax isdaba marin iyo munaafaq.
Hawiye waa iska masaakiin. Ayagoo dhulkoodii joogo ayey ka calaacalayaan wax ay ku filan tahay albaabka ka bax.
Xildhibaan Mahad Salad:
Nin rer Mudug ayaa waxalayiri Adoo 4 Cad oo Hilib ah haysta haduu tuug kuusodhaco oo 2 kaaqaato inteeh kuu so haraysa?
Markaasu yiri 5 Cad baa iisoo haryasa, markasa lagu yiri sidee kugu sooharee ?
Markaasu yiri: 4 tii Cad iyo ninka Maydkiisa haystaa.
Hadda Fahad iyo Farmaajo waxaan leenahay dadkaan dad ladhicikaro maahan maali cad baad riyoonaysiin.
Garqaad nin reer xamar ah aa tuug usoo dhacay xaaskii dhahday ar tuuga!!! afkuu qabtay gabadhii tuugii wixii alaabyaalay ayuu qaatay waana baxay xaaskii waxeey dhahday tuuga mxd noga celinweyday wuxuu yiri hadiis iskudayilahaa inaas kastuumadeyda qaato waxaas arkilahaa
Waar wuxu badowsana oo daanyeersanaa. Guurguurta ma ridi karaa dagaal? Jawaabtu waa maya?
Maxaa ku khasbahaya inuu maalin walba caga juglayn been ah ku meeraysto
Daanyeertan waxay u xiiseen ku khammaaridda qarankan.
Unukaa leh baa yaabay.
Ma dagaal ahli baad u xiisa qabtaa?
Wallee maama Hobyo Godan baa idinka mowqif caddayn adiga iyo Odayga Sheekhaleed ee qabiilka golahan ka laqbeeya, Uganda lover aka Dabshid.
Su’aalihii aan ku waydiiyay oo kale ayaan cisho dhowayd waydiiyay. Waxay af cad oo aan gabbasho lahayn ugu jawaabtay sida dadka lagu yiqiin qaran dumiska. Waxay af muggiisa ku tidhi Qaranka Soomaaliya ha lagu kala yaaco nin walba tuuladiisa ha ku ekaado. Badownimo iyo jaahilnimo.com
Caydu waa ceeb ee yaan lays caayin saaxiib xad gudubka jooji…….. Anigu maahi qof dumar ah waxaan ahay Nin labo xiniinyo ka laalaado …… lol
Yaan laysku xadgudbin wixii siyaasad ah aan iskaga soo horjeedno laakiin saqshiyan is lays maago maaha daw wanaagsan.
Waa Halkiii ay taagnaayeen,Qanyare,Muuse Saudi,Cismaan Caato,Bashir Raage,Cumbria Filish iyo inta aa iloobay magacdooda.
Waa Halkiii lagu fashiliyay Cabdi Qaasin.
Waa Halkiii kooxdii uu jabiyay Cabdullaahi yusuf.
Barasho wanaagsan iyo Talada Hawiye.
Kkkkk war hobyo godan naag maaha ee waa nin akhyaar ah
Saaxiib Ali Zubeer aka Alshabaab wuu ogyahay in aan nin ahay ee Dagaalkii siyaasada baa meel xun la galay lol.
Saaxiib waan kaaga mahad celinayaa sida aad iigaga yuraysay Ali shabaab iskana ilaali yuusan isku kaa qarxinee……!
Sideetan nin oo hawiye ah oo wada musharixiin ah hal nin oo qorshe dawladnimo wata kuma jiro kulli waxay kaga dhagan tahay farmaajo
Xasan gurguurte waxaan leenahay maahmaahdii aad ku maah maahday shalay ayaan kugu dileynaa oo aheyd shalay maanta ma aha kkkkk
Hadaad u malaysay sidii 1991kii in la cararayo walee meydkaada in la warayo muqdisho
war hooy balaayo ha u yeeran yaa ku yiraahda
hadii somaliya laga rabo horumar iyo in dowlad la noqdo waa lagu qasban yahay in la maqlo hadalka xasan Shiiq hadii meesha ciyaar iyo buuq laga rabana daanyer farmaajo group iyo ciyaal Facebook haloo daayo marki ayaan la buuqo kuwana gaaweetadi iyo dhadhaab ha isaga laabten kuwa kalena meeshoda haka sii waden buuqa waayo waa la diidey in la isqanciyo oo wax maqcuula la isula yimad inta kadib bal hala arko ninkii yaxar xukumo
somali caqli xun
waa markan oo kale marki aan is idha ciyaal kaga xita af somali ha iska barin calashan heerka aan quus ka joogo waxan sidaa u idhi tusaale GEDO LAND
waa ninka ugu run badan inta halkan wax ku qorta
bal eega iminka
daanyer farmaajo wuu ku qanacsan yahay sida uu wax ku wado iyo xukumadisa ciyaal Facebook xita hadii wadanka iibsado
taa bedel keeda ma maqli karo xasan shiikh
waayo xasan iyo farmaajo
xasan baa wax qabad badna
marki aan iska dhaafno qabyaalada iyo qiira jabaanta somalida
sidaa darted dawo malahan ee kii dhadhaab kayimidna yaan gaaweetadi kaa lumin kii isbaaro utiileyna yuu ka raagin kii geel raacan jireyna meel daaqleh raadso
Wali ma soomaaliya ayaad dhex mushaaxaysaa ninkii Donald trump ahaana waa idin dhaafay haduu soo laaban lahaa waxaa u qorshaysnayd inuu soo tarxiilo 4000 kun oo soomaali ah
sxb waxan jooga adis ababa meeshi farmaajo geedaha ku beeray hotel u dhow in sha Allah waxan baxaya 23 bisha
dhowr cisho ayaan jooga adis ababa oo waxan islaha waa intaas oo aad aragta ODAY GABRE
lakin hada wan isaga tegaya
Xerada dhadhaab hada waxaa ubadan hawiye waliba kuwii axmed madoobe kacayriyay kismaayo iyo jubada hoose daaroodkii dhadhaab kujirayna kismaayo ayaa guryo tiro badan looga dhisay war ninyahow war mahayside xaaladu waa is badashay kkkkk anigaa tagay laba sano kahor gaaljecel iyo shiiqaal iyo raxanwayn baa kabuuxa kkkkk
War deg deg ah wasiir axmed ciise cawad oo is casilay iyadoo booskiisana loo magacaabay maxamed c/risaaq maxamuud abuubakar
ma hurda qabatay
raisulwasarahii laba asbuuc ayuu wadanka kamaqan yahay oo wuxu jiraa galmudug
caku biirta lagu soo shaqatago
Taageeradii dawladu taageertay dagaalka eithopia ayuu beeniyay malaha saas ayay uga qaadeen laakiin sidaas ooy tahay isla markiiba safiir ayaa loo magacaabay
Sxb kuwaasi waa ku meel gaar, lkn reer Qurac waa TOOGTO DHADHAAB.
Wali ma waxaad joogtaa Xamar Cadde mise Qabowgii Qurbaad ku soo laabatey ?
Xasan Sheik waan ku raacsanahay:
Xukunka ayaan jeclaaday oo laaluush iyo liis xildhibaan bug ah qortay ku joogin.
Farmaajo waa daanyeer aan fahmin wixii la isku dilay.
Farmaajo haloogu dhaarto in Somalia dictator dambe ka talin doonin.
Daanyeer Farmaajo inta nagu celin civilwar cusub, haloo aqli celiyo, daanyeerka aqliga xun.
Dal aan nidaam lahayn in god ku dhacaan ayaa u dambaysa.
Macal wadama hore u maray ayaa nin xukunka isku dhajiyaa laakiin sharci iyo qasab looga soo bixin guriga madaxtooyada..
Waad aragteen waxa Trump oohin ka socda..
Nidaam ayaa celin oo qasab lagasoo jiidin. ”The White House”
Alla xukunku macaanaa?
Daanyeer Farmaajo hadduu diido in kasoo baxo Villa Somalia! waa in laga soo jiido sida Trump white house. kkkkkkk
Aniga makala jecli daanyeerka/Daanyeerta villa Somalia fadhiya, kekiya waa sharci iyo wax la isla ogolyahay ku joogaa , xitaa Hooyaday kama yeeleen in kursiga qaran ku dul suuxdo..kkkkkkkk
Allow hooyaday u dambi dhaaf.🤭
Horta raxmada Alle lagama quusto, oo quustu waa meesha ugu danbeysa oo qofku gaaro. Soomaalidu waa dad aad u caqli xun hadana ISU haysta inay dadka ugu fariidsan yihiin, waana sababta aad u aragto in iyada oo nalaku wiirsanayo aan Sanka la wada taagayno.
Waxyaalaha mushkilada ah oo aan xal loo heleyn waxaa Ka mida dabeecada aan iswaafaqsaneyn (inconsistency) ee Qofka Soomaaliga ah – waxuu shalay diidanaa buu MAANTA taageerayaa, waxuu MAANTA taageerayana beri buu burinayaa. Sidoo kale mana gar qaato mana garan karo maxaad xaq u leedahay maxaase xaq laguugu leeyahay; bal eeg wax hadii loola yimaado uu afka qaylo Ku dhufan lahaa buu maalin walba la soo taagan yahay!!!
Ninbaa waxaa laga sheegay aduun la joogana uma jeedo, aakhiro loo cararana lama sheegayn. Hada quusna xal maaha, Xaalka Soomaalidana Rajo badani kama muuqato. Laakiin waa in loo dhabar-adaygaa oo loo sabraa.
waayo waa nin ilowsan wixii lasoo maray waa ilowsan sidii shalay wax loogu dhiibey waa ilowsan qaabki shalay doorashadu u dhacday waa nin ilowsan in aan nina maanta xoog lagu qasbi karin waa nin ilowsan in qabiil walba dowlad yahay maanta waa nin ilowsan uu kusoo ololeyey shalay isagu iyo Sharifti loogu dhiibey mana lahan dad la taliya iyo qabiil qabta iyo nabadon iyo caqli iyo siyaasad ku filan toona waar xage loo socda